I-LG V30 entsha iya kuthengiswa ngoSeptemba 28 | Iindaba zeGajethi
I-LG yaseKorea kufuneka inyuse ukwahlulwa kwayo okuhambayo. Kwi iziphumo zekota zamvanjeNangona befumene inzuzo, oku kuye kwabangela ukwahlulwahlulwa kwezixhobo zasendlini. Okwangoku, icandelo le efowuni iyaqhubeka nokuvuna ilahleko, ke unokufumana ukuba i-LG G6 yakho ayikhange ifumane iziphumo ezilindelekileyo.
Nangona kunjalo, kubonakala ngathi uluhlu oluphakathi luyavuka. Ukukhutshwa kwamvanje kukhethe uluhlu olutsha olubizwa ngokuba yi 'Q? kwaye ngawaphi amaqela anomdla njenge LG Q8. Le yokugqibela yamkele into esele ikho kwizixhobo zosapho 'V' njengescreen esikabini. Kwaye kubonakala ngathi ubunzima bolu sapho lunomdla buza kuboniswa ngo-Agasti olandelayo ukuba buthengiswe kwihlabathi liphela nge-28 kaSeptemba. Imalunga ne-LG V30 entsha.
I-LG V30 liqela Iya kuziswa kwi-IFA elandelayo eBerlin eya kubanjwa ukusukela nge-31 ka-Agasti ezayo. Kwiintsuku kamva yayiza kuthengiswa eMzantsi Korea. Ngelixa e-United States umhla ohleliweyo, njengoko kutyhiliwe Android Authority Kungenxa kaSeptemba 28. Ukongeza, ngokwento efundiweyo, inkampani yaseAsia ayifuni kulinda ixesha elide kwaye ifuna ukuba icandelo layo elihambahambayo liphucule ngokukhawuleza. Ke kutheni le nto uqalisa ukuqalekisa kangaka? Kwilizwe liphela le LG V30 nayo iya kuthengiswa kwangolo suku.
Kodwa ungalindela ntoni kweli qela litsha? Ukuqala, njengoko kusaziwa, iqela liya kuba nalo Isikrini esine-intshi ezi-6 esinee-bezels ezimxinwa. Ukongeza, umsipha wayo ophambili uza kutyikitywa yiQualcomm kunye ne-Snapdragon 835 chip yayo kunye ne-4 GB ye-RAM. Njengoko ubona, ufuna ukuthetha ubuso ngobuso kunye nesiphelo secandelo.
nayo, Iikhamera ezimbini zangasemva kunye neprofayile ephawulwe kakhulu kulindeleke kwicandelo le-multimedia. Oko kukuthi, kokubini kumculo kunye nokudlalwa kwakhona kwevidiyo, into esele ibonakala kwiimodeli zangaphambili zoluhlu. Ngaba uza kubheja ngokubandakanya iscreen esiphindwe kabini njengoko sele kwenzekile kutshanje IMeizu PRO 7? Ngezi nkcukacha kuya kufuneka silinde iiveki ezimbalwa ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG V30 entsha iya kuthengiswa ngoSeptemba 28
Ungazikhuphela njani iifoto kunye neevidiyo kwi-Instagram ngendlela elula